DIGNIIN! caddayntu Aros Energy sii si ay u iibsadaan guryaha ku Holm | Holmbygden.se
DIGNIIN! caddayntu Aros Energy sii si ay u iibsadaan guryaha ku Holm
Posted on 30 January, 2014 by Holmbygden.se
Maanta daryeelka loo baahan yahay iyo in ay kor u eegto waxa ay leedahay in la sameeyo ganacsi mortgage in Holm ah. Inkastoo headlines la caddayn Aros Energy iyo Johan Stendahls jir ah oo dhan “Skandalhus” dayrta, sida shirkadda sii wadaan in ay isku dayaan in ay soo iibsadaan guryaha cusub ee Holm. In xilliga dayrta, waxay la soo sheegnay, oo ay ku jiraan khiyaamo curdan tahay in laanta socdaalku ku, Oo Laysinkooda shaqaalaha shisheeye gaar ah, maamulka amarada, kireystayaasha guryaha la dayacay iyo maalmul.
Iyada oo dhawaan sida in ka badan toddobaad ka hor loo yaqaan Bengt Staaf xarunta guryaha is-kaashatada “degsiimooyinka” dugsiga Anundgård oo doonayay in ay iibsadaan bannaan a 4:a waxaa. Waxa ay aheyd markii afaraad oo isku xigta in caddayntu Aros Energy ay isku dayayaan si aad u hesho in ka badan guriga iyada oo dad kala duwan. Horaantii dayrta, ayaa isku dayay in ay soo iibsadaan by Fredrik Wedelstam oo ahaa CEO muddo hal todobaad oo kaliya (!) iyo “Pär Karlsson”, alias ah Johan Stendahl sheegay inay iska dhig sidii mid. Marka BRF:Holm iyo wakiilka ah Castor looga shakisan yahay khaladaad, ma heli karto jawaab toos ah, iyo waxa ay si joogto ah wuxuu ahaa xaaladaha laga shakiyo, iyagu ma ay u doorteen in ay iska iibiso iyaga. Sidaas waxa uu ahaa waqtigan, iyo su'aasha ah haddii ay ka walaacsan caddayn Aros Energy waxay ahaayeen wax iibsadaa iyo ujeedada guri iibsashada, mar kale hir on jawaabaha.
Sidoo kale ma cadda sheegay in ay ahayd dhamaadka bisha August marka HBU xiriiray Bengt Staaf ku saabsan korontada ee ay (Li naagtiisii ​​iyo aabbihiis-in-Bernts) hantida “Pensionärshemmet”. Waxaa markaas ahaa qof aan la shaacin ah oo aan la magacaabay karo cid lagala xiriiri lahaa oo ku saabsan dhibaatooyinka. caddayntu Aros Energy ayaa Bengt Staaf kaliya maqlay inkasta oo ay weyddiisteen kirada kireystayaasha iyaga u gaar ah. Dhowr maalmood ka dib offenliggjordes go'aamada qoondaynta Migrationsverket guri guri doonka Aros Energideklarationers. Dhowr usbuuc ka dib, agaasime ku-xigeenka Bengt Staaf shirkadda iyo laba bilood ka dib, bishii October, wuxuuna ka mid ahaa in lagu daro milkiilaha aqlabiyad ah uga bixiyaan caddayn Aros Energy a (kaas oo sidoo kale leh “macalinka Housing”).
På dagen före julafton fick däremot den inneboende barnfamiljen i Anundgård besked av styrelseledamoten Michael Sterner om att de måste flytta ut. Shirkada ayaa si joogta ah isku dayeen in ay ka heli qoyska siyaabo kala duwan. Xagaagii lasoo dhaafay, waxay bixisay amar kuma laha si ay lahayn xoog guriga laba (!) todobaad iyo qolka dharka lagu dhaqdo waxaa la demiyo muddo dhawr bilood ah. Waxaas oo dhan iyadoo ay jirto in shirkadda waxa uu xaq u lahayn in ay ku qasbi qoyska, Marka Loogu Yeedho muddada iyo xaq sharci ah si deggan. Xitaa Johan Stendahl oo naftiisa Pia Karlsson ayaa la xidhiidhay qoyska iyo isku dayeen in ay iyaga ka heli, inkastoo ay “mar dambe wuxuu leeyahay sifooyin u sameeyo”.
Markan eedda Aros Energy caddayn amar ka Agency deegaanka in kuwo kale. bedeli daaqadaha guriga qoyska ka dibna ku haboon mar kale isku dayaan in ay ku qasbi qoysaska carruurta leh ka guurto. Dayactirka waxaa la samayn karaa oo aan ka guurin ka hor.
“CEO cusub ee caddayntu Aros Energy”, “Golaha helo ganaax iibka”, “Stendahl maxkamadda”
news la xiriira ee warbaahinta kale Read bishii la soo dhaafay.
aqalka dhista cusub ee ururka guryaha ay doortaan halkii ka iibiso qoys carruur leh in Holm dhaqaaqin maalmaha. Ku soo dhawow Holm!